Izixhobo zoBumba ezenziwa ngodongwe oluzenzekelayo, uMatshini oCaba oCwangcisiweyo woBumba-iBricmaker
Makhe UBE YINGCALI UMENZI WEZitena
Ukuze ube yingcali yomenzi wezitena, kuya kufuneka uqwalasele ngokupheleleyo le miba mibini ilandelayo yokumisela isityalo esitsha nesale mihla sezitena: Uhlalutyo lwezixhobo zokwenza imveliso, ukuYila ubuNjineli, ukuKhetha izixhobo, ukuLawula ukuLungelelanisa. SinguBricMaker singathanda ukwabelana nawe ngamava eminyaka engama-20 kwaye sinikezela ngezixhobo ezisemgangathweni kunye nesisombululo setekhnoloji, ukukunceda ufumane izibonelelo zoqoqosho ezinkulu kwaye uqonde ixabiso lakho lobomi!
AmaQela aBini kunye nokuBekwa kweRobhothi
Wamkelekile kwi BricMaker
Ukuveliswa kwezixhobo zezitena, ukubonelela ngokubonisana noyilo lwesityalo sezitena, ukuyila eziko kunye nolwakhiwo kunye nesisombululo semveliso esizenzekelayo.
I-BricMaker ngobuchule yodongwe (sintered) izixhobo zokwenza izitena, i-R & D, ioyile kunye nesisombululo sezityalo zezitena. I-BricMaker igubungela iihektare ezingaphezu kwe-10, ine-30,000 yeemitha zesikwere zemveliso, ngokutyala imali ezizigidi ezingama-30 zeedola zaseMelika, kwaye phantse abasebenzi abangama-200 ababandakanya amagcisa angama-90 kunye neenjineli. Kule minyaka ili-10 idlulileyo, uBricMaker wenze utyalomali olukhulu lodongwe (sintered) izixhobo zetena i-R & D, yamkela itekhnoloji yokuvelisa phambili kunye nezixhobo zethuluzi, zibonelela ngesisombululo esibanzi sezityalo zezitena ngezixhobo zokuvavanya ukuvavanywa, uyilo lobunjineli bemveliso, ukwakhiwa kweziko, ufakelo lwezixhobo kunye nokuyalela, uqeqesho lobuchwephesha kwezobugcisa njlnjl. Ukunikezela ngenkxaso yezobuchwephesha kumashishini amaninzi ezitena ekhaya nakumazwe aphesheya.
USD 30 yezigidi +
Abasebenzi beR & D
Iqela lama-90 +
wanikela ngo-2000 +
Ngama-30,000 m2 +
Izixhobo zokuvelisa izitena zeBricMaker, ukubonelela ngokubonisana nokuyila izityalo zezitena kunye nesisombululo semveliso esizenzekelayo.
Iimpahla ezingekasilwa Ukuhlalutya
Yintoni ekujolise kuko kokugqibela kunye nemveliso yoluvo? Leliphi inqanaba lokugqibela lokufaka uphawu kwimarike? Ngaba ungathanda ukuvelisa isitena / ibhloko esemgangathweni esemgangathweni ophakamileyo? Ukuqinisekisa ukufumana imveliso ekumgangatho ophezulu yezitena okanye ibhloko, kuya kufuneka ujonge nzulu izinto zokucoca kunye nokuguga, ukomelela kwezitena / ibhloko eluhlaza, umgangatho wemveliso egqityiweyo kunye namandla.
Ngophuhliso lweemarike, kule mihla iimveliso zentengiso ezinokhuphiswano olushushu. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ngokupheleleyo utyalo-mali lwezityalo ngezitena ezinomthamo ophezulu, wandise uqoqosho lwakho, ngaloo ndlela ubambe izibonelelo zakho zokhuphiswano lokuthengisa kunye nokugcina uphuhliso olulungileyo.
Thina Bricmaker sicinge ukuba ukulawulwa kwexabiso lokuvelisa yeyona nto iphambili kuyo nayiphi na ifektri. Umzekelo, iindleko zempahla eluhlaza, iindleko zamanzi kunye nezamandla, iifizi zesandla, ukugcina iindleko zezixhobo, izinto ezincedisayo kunye nezixhobo zomatshini, ukuba wenza ulawulo olufanelekileyo kulawo macandelo okuvelisa kwaye uwenze abe semgangathweni ngakumbi nangakumbi, kunye nentengiso elungileyo iimveliso ezigqityiweyo, siyakholelwa ukuba isityalo sakho siya kuphumelela kwaye sihlala sigcina ukusebenza kakuhle.
Thina Bricmaker sikunika inkonzo yenkqubo evela kubonelelo lokuqala lwezityalo ngezitena, ukwenza izitena zonke izinto ezahlukeneyo zokuhlalutya kunye nokuvavanya, ukuyila ubunjineli bezityalo, izixhobo ezikhetha iingcebiso, ulawulo lokugqibela lwezityalo, iingcebiso, ixesha lokuphila koomatshini emva kwenkonzo yokuthengisa, indawo yokugcina kunye nezinto zokuncedisa izixhobo zonikelo. Isuphamakethi yeBricmaker ikunika inkonzo yokuthenga emise-kunye nokugqiba isisombululo seprojekthi yokujika kokubini ekhaya nakumazwe aphesheya.
Ukuze kuncitshiswe ubuninzi beendleko zesandla sokwenza izitena, ukuzenzekelayo yindlela engenakuphepheka yophuhliso lwezityalo zezitena. Isitena sodongwe / ibhloko yesityalo esizenzekelayo ibandakanya oku kulandelayo: izinto ezahlukeneyo zokwenza izinto ezifanayo, umlinganiso wokunkcenkceshela; izixhobo lokondla nolawulo esizisebenzelayo; isitena esiluhlaza / inkqubo yokusika-yokuhambisa-ukuhambisa-ukufumba; itonnilo, itonnoli ehambayo, inkqubo yolawulo olumanyanisiweyo oluhlanganisiweyo; Inkqubo yokupakisha isitena / yebhloko egqityiweyo.
Awunakho ukutshintsha ukhuphiswano olushushu lwentengiso, into esinokuyenza ukuzama ukufumana iindleko zokuvelisa ezisezantsi. Singakunika izixhobo ezisemgangathweni kunye nezityalo zezitena eziphambili ukuyila, thelekisa nezinye izibonelelo ezifanayo okanye ezifanayo, iimveliso zethu kunye nokuyila ngokugcina amandla ama-30 ~ 40%, kunye nokusebenza okuphezulu kwe-130% +.